He physically dropped mboro yake mubeche rangu – KUSVIRWA kwandakaitwa mumota murume ari kuUK – Makuhwa.co.zw
Ndini uyo ndapedza hangu basa uri musi wemugovera manheru apo nguva dziri kuma4, ndaifunga mwana wangu andainga ndasiya mangwanani, nemusikana we basa, uyezve dzimwepfungwa dzichifunga baba vemwana avo vaive vachonera Kuchando (UK) chokwadi asikana ndaive ndaane 9 months no kumbosvirwa iyo yedu yekuzvibata iyi.
Right ..ndakabva kuna first street kwandaishandira hangu uko netsoka ndokubva ndano mira pakona ya Nelson Mandela naJulius nyerere way, apo ndaive ndaka mira pangu ndega ndichidawo kuwana lift chop chop sezvo at times isu vakadzi pa lift its one time. Asikana pakamira imwe BMW 3 Series yaive ine matinted windows iri yeblue. Maive nemurume Mumwechete (driver) akandibvunza kuti “murikuenda kupi ambhuya” ndikati kwaMakoni mukwasha, zvikanzi pindai tiende amai, apa hana yangu yaka rova nekuona masimbiro akanga akaita zirumeracho, zvakabva zvandifungisa baba Tino vakanga varovera kuchando.
Mumota makaita karunyararo kwe almost 15min, takazoti tava paCeldon ndakaona baba vaye vondi tarisa tarisa makumbo angu, zvesure baba ava vakagutsikana nezvavaiona ini ndakabatana asikana, baba ava hapana chavakashora pandiri. Ndakanzwa vondibvunza “ambhuya makaroorwa here” ndakadaira zvinyoronyoro, ndikati hungu mukwasha,zvikanzi kobaba varikupi? Ndikati wangu murume akaenda kuUK about 9 months ago, “9manzi!!!?? vakakatyamadzwa nazvo baba ava, zvikanzi saka ambhuya muri kuita sei ivo baba vasipo seizvi?. Ndakavatarisa baba ava neziso raiti please dai zvaiita mukwasa tawirirana mambo Ndisvirawo vakomana ndanzwa ini.
Ndakangoti hapana hangu, kondingagodii hangu ini munhukadzi, dai ndiri murume ndaimiramira, Apa ndakaona kuti ndikada kunyara apa hapana changu, let me express that I am in dire need of a good f#cking. zvikanzi ambhuya ndoda hangu kuita bamunini Francis, zvakaipei hazvo?.
Asikana kutaura sure pauno tsikatsika hunge usina zemo wena, chokwadi baba ava ndakavati hapana chakaipa as long zvisingazozivikanwe nehama dzemurume wangu chete, baba ava havana kutora nguva kupindura “no amai izvo takazvingwarira” ipapo taive tapfuura bridge tave kusvika pachikwanha, baba vaye vakati, ambhuya sorry ndoda kumbotengawo pint yangu yebeer pano apa do you mind? izwi rangu raive ratoshoshoma kunge yakanga yatopfekedzerwa muchinena changu asikana, “ok no problem”,I replied, apa ndichitonzwa kuti ndatove murwere zvake, chokwadi ndaive ndatonuna zvangu with a lot of anticipation, for a heavy f#ck.
Motor yakaturner ichienda pakabottlestore panonzi Pachirinda, izvohandina kuziva kuti baba ava vakanga vatoronga zvekuda kundisvira havo, vakabuda mumota ndokunotenga beer ravo ndokudzoka vachigara mumota, after 5min zvikanzi mirai amai ndimbonwa rimwe rechi two tozoenda. Vakabuda ndokuenda kumabooking rooms, I am sure he went to pay (kutenga musha) for a room, he did spent another 5min then he came back and said to me please can we go and relax somewhere sweetie, ini ndaive ndato reader hangu situation yacho ndakabva ndati “its ok”, sezvo ndaidawo kumbosvirwawo veduwe.
Takapinda muneimwe room maive muine malights ari deem, door richibva rakiiwa nechemukati, haiwa hapana kumbotora kana maseconds ndakaona baba vaye-ave kubvisa hembe dzavo, ndakabva ndangoziva kuti chabvondoka, vakandibata mashoulders angu zvinyoronyoro vachidzikisa ruoko rwavorwerudyi nechekumagaro angu haiwa ndakanzwa kunge vaakutonditundira kare baba ava.
Asikana ndakanga ndisisagone hangu nekudakusvirwa. To be honest all what followed was like lightning, I was stripped naked and with the exception of my bhurugwa only ndakati ndobvisa ndega, during this time when he was stripping me off his blambi was huge yanga yakashatirwa, ohh! its thickness was like 7cm in diameter asikana apa riri zimugwara, Zimuchemedza mbuya chairo.
Even my hubbie doesn’t have zimboro rakadaro, I really admired him, akanga atondinonokera, beche rangu rakanga ranuna kare ne jinja veduwee, 9 months is not a joke without kusvirwa, You know what,? I thought he was going to put on a plastic but no, he physically dropped mboro yake mubeche rangu asikanaka, yanga yakanuna ende ichipisa, ende yakanyatsopinda yese wena, ndakanzwa kunge malungs angu a vekudisloketwa, ndakanakirwa asikana, kubva zvakaenda hubbie yangu ku UK 9 months ago I haven’t done s.e.x with anyone. Ndakabhaudwa nababa ava kunge vainge vaputambanje, ndainzwa iri mukati kuti haa, zinzvonyo racho raive zihombe, rainyatsondi bvoronga mumadziro ebeche rangu, amai kani, neniwo kusvirwa ndaida asikana.
He stopped and changed the position for a dogggy-style but b4 that ndakarohwa matama nemboro yakanga yakatota ichibva mukuguma chibereko changu, ndokubva yanzi mumukanwa mangu dyovhwo, hey ndakada kurutsa apo ndaitonzwa kuti iyi yandaidya yaive soup yegambi rangu, hey! but zvainaka. Yakabuda mumukanwa mangu ichibva yaendeswa direct mumhata yangu asikana ndakamboti zvimwe kupotsa asi ndakanzwa kuti kwaitova kusvirwa chaiko, murume wangu haana kumbobvira andisvira kudaro asikana, this was heaven asikana. Akaiburitsa kumhata kwangu pakarepo ichibva yangonzi chwi-chwi neshure, munyini yangu, haana kuzotora maseconds achibva atunda, baba imi sperm racho ende raipisa, ende ngariwande, I thought ndaitundirwa ne mboro 5, nokuti mamwairo avaiita masperms acho hey ka. Ndakamboti asibaba ava vakanga vari barchelor kani, nokuti matundiro avo haiwa, fire brigade chaiyo.
Chiregai asikana ndikuudzei zvakazoitika, ini semunhu akanga avanenguva asina murume, ndaisanwa matablets e family planning, yakabva yabata nhumbu, apo baba vekwangu vaive UK, iine two weeks sure ndaka 4nera murume wangu ndikati “ini ndava kuenda hangu kumba kwedu, kana usina kuuya in a week’s time”, apa ndaiitira kuti akauya zvaibva zvabalancer nhumbu yongoita kunge ye hubbie yangu, asi hey zvakaramba.
Asikana ndodii, apa nababa vaye tiri kusvirana zvomene….
Related Topics:He physically dropped mboro yake mubeche rangu - KUSVIRWA kwandakaitwa mumota murume ari kuUK